भिडियो Archives - Rajmarg Online
16Feb By Rajmarg OnlineNo Comments
भिडियो, मनोरञ्जन, सिनेमा
डा. दिनेश दर्नालको पहिलो पप गीत ‘झरी’ बजारमा (भिडियो सहित)
दाङ, ४ फागुन। डा. दिनेश दर्नालले आफ्नो पहिलो पप गीत ‘झरी’ नेपाल संगितिक बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा बुटवलका दर्नाल स्वयमको शब्द तथा स्वर रहेको छ । गीतको म्युजिक एरेञ्ज पछिल्लो समय चर्चित गायकको परिचय बनाएका अलिफ खानले गर्नुभएको हो । बुटवलमै छाँयाङ्कन गरिएको गीतको म्युजिक भिडियोमा आभाष ज्ञवाली र मेलिना ठकुरीको अभिनय रहेको छ । मोडल ज्ञवाली स्वयमको निर्देशन रहेको भिडियोको छायाँङ्कन श...
20Jan By Rajmarg OnlineNo Comments
युट्युबमा ‘छ माया छपक्कै’ रिलिज
चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । चलचित्रको डिजिटल अधिकार लिएको आमा अग्नीकुमारी मिडियाले यस चलचित्रलाई आफ्नो च्यानलमार्फत मंगलबार रिलिज गरेको हो । गतबर्षको दशैंमा रिलिज भएको चलचित्रको पाइरेसी भएपछि यसलाई हतारमा युट्युबमा रिलिज गरिएको छ । दीपकराज गिरी निर्माता रहेको यस चलचित्रले राम्रो कमाई गरेको थियो । चलचित्रलाई रोहित अधिकारीले निर्माण गरेका हुन् भने दीपेन्द्र लामा य...
19Jan By Rajmarg OnlineNo Comments
‘फुलबुट्टे सारी’ लाई युट्युबमा २ करोड बढी भ्यूज (भिडियो)
राजनराज शिवाकोटीले रचना गरेको गीत ‘फुलबुट्टे सारी’ को फिमेल भर्सनलाई छोटो समयमा नै २ करोडभन्दा बढीले हेरेका छन् । यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको ३९ औं दिनमा २ करोडभन्दा बढीले हेरेका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म यो भिडियोलाई २ करोड १७ लाखले हेरेका छन् । मिलन नेवारको स्वर रहेको यो गीतमा पल शाह र मलिका महतको अभिनय छ । युट्युबमा यो गीत ओर्जिनल गीतभन्दा बढी हेरिएको हो । गीतको भिडियोम...
28Dec By Rajmarg OnlineNo Comments
स्मारिका र सामरिकासँग पल (भिडियो)
गायक विशाल निरौलाको नयाँ गीत रिलिज भएको छ । ‘माया लाउन मसँग’ बोलको गीतमा विशालसँगै पछिल्लो गायिका रचना रिमालको समेत स्वर सुन्न सकिन्छ । गीतमा पछिल्लो समय टिकटकबाट चर्चा कमाएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी स्मारिका र सामारिका ढकालले मोडलिङ गरेको छ । उनीहरुको अपोजिटमा अभिनेता पल शाह फिचर्ड छन् । गीतको भिडियोमा दुवै दिदीबहिनीसँग पलको रोमान्स देख्न सकिन्छ । त्यस्तै यो गीत रचना, स्मारिका र सामारिकाक...
24Dec By Rajmarg OnlineNo Comments
फिचर, भिडियो, मनोरञ्जन
‘छक्का पन्जा–३’ युट्युबमा
दिपाश्री निरौलाद्वारा निर्देशित ‘छक्का पन्जा–३’ सार्वजनिक भएको छ । हाइलाइट्स नेपालको युट्युवमार्फत फिल्म बुधबार साँझ सार्वजनिक भएको हो । फिल्म सार्वजनिक भएको २४ घन्टा पनि नबित्दै युट्युव ट्रेन्डिङमा आउन समेत सफल भएको छ । फिल्ममा दीपकराज, दीपिका प्रसाईं, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, शिवहरि पौडेल, बुद्धि तामाङ, लक्ष्मी गिरीलगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ । प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, व...
23Dec By Rajmarg OnlineNo Comments
‘वीरविक्रम–२’ युट्युबमा रिलिज
नेपाली कथानक चलचित्र ‘वीरविक्रम–२’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । मिलन चाम्सको निर्माण तथा निर्देशन रहेको चलचित्र युट्युबमा रिलिज भएको हो । चलचित्रमा पल शाह, नाजिर हुसेन, वर्षा शिवाकोटी, बुद्दि तामाङ, देशभक्त खनाललगायत कलाकार मुख्य भूमिकामा छन् । https://youtu.be/QupWAlzGAHE...
16Dec By Rajmarg OnlineNo Comments
Unknown_news, भिडियो, मनोरञ्जन
गीतमार्फत परदेशीको पीडा पोख्दै गौरव र सृष्टि (भिडियो)
गौरव पहारी र सृष्टि खड‍्काको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो ‘म छु विदेशमा’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रमोद खरेलले स्वर दिएको गीतमा सरोज पोखरेलको संगीत र अम्बिका गुरुङको शब्द सुन्न सकिन्छ भने गीतलाई एरेन्ज भने उदयराज पौडेलले गरेका हुन् । भिडियोलाई निसान कश्यपले निर्देशन र सम्पादन गरेको गरेका हुन् । परदेश जानुपरेको एक परिवारको प्रेमकथा देखाइएको गीतको भिडियोमा ज्ञानेन्द्र शर्माको छायांकन रहेको छ । ...
युट्युबमा रिलिज गरियो सुपरहिट फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ (फिल्मसहित)
फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ युट्युबमा रिलिज गरिएको छ । गतवर्षको हलमा रिलिज भएर सुपरहिट बन्न सफल यो फिल्म हाल युट्युबमा रिलिज गरिएको हो । फिल्ममा विपिन कार्की, वर्षा राउत, दयाहाङ राई, रविन्द्रसिंह बानियाँ, रविन्द्र झा लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका छ । ‘जात्रा’ को सिक्वेल यो फिल्म कमेडी विधामा निर्माण गरिएको छ । मध्यमवर्गीय परिवारका तीन युवाले सुन भेट्टाउँदा त्यसलाई लुकाउन गरेको प्रयास फिल्ममा द...
10Dec By Rajmarg OnlineNo Comments
कन्दरा ब्याण्डको ‘मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ’ सार्वजनिक
कन्दरा ब्यान्डले स्वरसम्राट नारायण गोपालप्रति समर्पित गर्दै उनको लोकप्रिय गीत ‘मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ’ लाई आफ्नो स्वरमा पस्केका छन् । कन्दराका गायक बिबेक श्रेष्ठ हाल अष्ट्रेलियामा रहे पनि उनि आफ्ना नेपालमा रहेका सहकर्मीहरुसँग उत्तिकै नजिक छन् र यहि नजिकपनलाई आफ्ना श्रोता/दर्शकहरुमाझ आत्मियता बनाउन उनि आफ्नो ब्याण्डसँग कुनै पनि स्टेज शो होश या गीत रेकर्ड कै बेला किन नहोश उनि नेपाल आइहाल्छन...
5Dec By Rajmarg OnlineNo Comments
अनमोल केसी र उपासना सिंह ठकुरी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’ युट्युमा रिलिज गरिएको छ । दुई वर्षअघि हलमा रिलिज हुँदा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको यो फिल्म युट्युबमा आज रिलिज गरिएको हो । हाइप बनाए पनि फिल्मले हल प्रदर्शनका क्रममा औसत व्यवसाय गरेको थियो । समीक्षा पनि सन्तोषजनक प्राप्त गरेको थियो । यसै फिल्मबाट डेब्यु गरेकी उपासना सिंह ठकुरी फिल्म क्षेत्रमा चम्किएकी छिन् । अनमोल र उपासनाका अलावा फिल...
भारतबाट २ छोरा-छोरी छोडेर बेपत्ता महिला नेपालमा फेला परिन्
दाङमा करिब ३४ प्रतिशतलाई खोप
प्रेसलाई अकुंश लगाउने कानुन स्वीकार्य छैन : अध्यक्ष पोख्रेल
तुलसीपुरमा खुल्यो एक करोड बढीको लगानीमा ‘नायक मार्ट’
मध्यपश्चिममै पहिलो पटक दाङमा सेनेटरी प्याडको उत्पादन